Sepe: idatha yokuqhathanisa, umqondo nokuthi ungayithola kanjani | Ezezimali Zomnotho
Encarni Arcoya | 09/05/2021 08:19 | Umnotho jikelele
Abantu abaningi, uma bengasebenzi, bafaka izicelo zemihlomulo yokungasebenzi. Lokhu kucutshungulwa ku-SEPE. Kepha kwesinye isikhathi udinga ukwazi ukuthi isimo sabo sihamba kanjani, ubaphathe, uthintane nabo, njll. Ngalokhu, umsebenzisi unedatha yokuqhathanisa ku-SEPE.
Kodwa, Yini idatha yokuqhathanisa ye-SEPE? Ingabe kufanele ubacele? Ngabe zinikeza izinzuzo eziningi kunezinye izindlela ukubheka imininingwane yakho eyimfihlo? Namuhla sisusa leli gama elingaziwa kakhulu njengoba kungenzeka libonakale.
1 I-SEPE nedatha yokuqhathanisa, ayini?
2 Ziyini izinzuzo zokuthola ulwazi ngale ndlela?
3 Ungakucela kanjani ukufinyelela ukwazi leyo mininingwane
4 Ungayihlola kanjani imininingwane yokuqhathanisa ku-SEPE
4.1 Ngabe kungcono ukufinyelela ngesitifiketi sedijithali?
5 Kwenzekani uma ungakwazi ukufinyelela leyo datha ku-SEPE?
I-SEPE nedatha yokuqhathanisa, ayini?
Ngakolunye uhlangothi, kufanele wazi ukuthi i-SEPE yi-State Public Employment Service, umzimba oyingxenye yoMnyango Wezabasebenzi Nokuvikeleka Komphakathi futhi oza esikhundleni salokho okwakwaziwa ngaphambilini njenge-INEM. Isebenze kusukela ngo-2003 futhi iphethe, phakathi kwemisebenzi eminingi, yezinzuzo zokungasebenzi, kanye nosizo, i-ERTES, njll.
Ngakolunye uhlangothi esinakho Idatha yokuqhathanisa ye-SEPE. Lokhu akuyona nje indlela yokuxhumana nalezi zinzuzo nge-Intanethi nangezindlela eziphephile zokuthi idatha yakho ivikelwe (njengakho konke okuku-inthanethi, ngendlela ehambisanayo). Le mininingwane ixhunywe kumuntu othola lezi zinzuzo futhi akuyona into "entsha noma izinombolo ezinikezwe i-SEPE.
Futhi ukuthi idatha yokuqhathanisa empeleni abanakho imininingwane yakho, ukukhokhelwa okuhambelana nawe kwezinzuzo zokungasebenzi noma izinzuzo ozitholile noma ozitholile, izicelo zakho ezisalindile, izitifiketi, ukuphika, njll.
Manje, ukuze ufinyelele, udinga okhiye abathile abenziwe nge-NIF yakho noma i-DNI yakho, noma i-NIE, inombolo ye-akhawunti yakho yasebhange nenombolo yakho yocingo noma usuku ocele ngalo inzuzo.
Ziyini izinzuzo zokuthola ulwazi ngale ndlela?
Idatha yokuqhathanisa akuyona into "endala", empeleni iyindlela enikwe amandla kusukela ngoJulayi 1, 2020. Kuyacaca ukuthi iphephe kakhulu kunaleyo endala (eyayifinyelelwa kuphela nge-akhawunti yasebhange ne-DNI) . Kepha futhi kunakho izinzuzo eziningi ezenza abasebenzisi bajabule ngayo. Isibonelo:
Awudingi ukubhalisa kuwebhu.
Awudingi isitifiketi sedijithali noma i-ID kagesi. Vele, futhi bakuvumela ukuthi ufinyelele ngayo, noma nge-password yomsebenzisi.
Kuyinqubo esheshayo uma unedatha eseduze futhi lokho ngokuvamile kunganiki nkinga (lapho ufaka idatha, enye into ukuthi iwebhu isebenza kahle).
Ngakho-ke, abasebenzisi abaningi ngokwengeziwe basebenzisa lolu hlelo ukubheka idatha yokuqhathanisa ne-SEPE.
Ungakucela kanjani ukufinyelela ukwazi leyo mininingwane
Mhlawumbe omunye wemibuzo ovelayo ngalesi sikhathi uthi ungayithola kanjani idatha yokuqhathanisa kusuka ku-SEPE. Mhlawumbe bakunikeza ikhadi nabo? Ingabe kufanele ubacele?
Empeleni, kulula kakhulu kunalokho. Futhi awudingi ukubacela, unabo uqobo. Ngokwesibonelo:
Uyazi ukuthi yini i-DNI yakho noma i-NIE yakho?
Inombolo ye-akhawunti yakho yasebhange? Ungahle ungayazi ngekhanda, kepha impela unayo leyo datha ephawuliwe.
Yebo, ngalokho usuvele unedatha yakho yokuqhathanisa futhi yibo ozoyisebenzisa ukufinyelela i-State Public Employment Service, okungukuthi, i-SEPE.
Ungayihlola kanjani imininingwane yokuqhathanisa ku-SEPE
Manje njengoba wazi ukuthi awudingi ukwenza noma yimaphi amaphepha, ungahle uthande ukufinyelela kwimininingwane yokuqhathanisa i-SEPE enayo ngawe, ikakhulukazi ukubona ukuthi konke kulungile noma udinga ukwenza noma yiziphi izinguquko. Ukuze wenze lokhu, kufanele qala ngekhasi le-SEPE:
Kulokhu, iya engxenyeni yombuzo wokuSebenza bese ubheka ithebhu yedatha yokuQhathanisa.
Uzothola isikrini lapho uzocelwa khona ukuthi ubhale i-NIF yakho (i-DNI enonhlamvu omkhulu) noma i-NIE (Ubuzwe bangaphandle obuhlala ezweni).
Okulandelayo, kuzofanele ufake izinombolo eziyi-10 zokugcina ze-akhawunti yakho yasebhange, usebenzisa inkambu ye-IBAN.
Isinyathelo sokugcina sizokunikeza ukuthi ukhethe phakathi kokukhethwa kukho okubili: faka usuku lwesicelo sezinzuzo zokungasebenzi noma ufake inombolo yakho yocingo.
Uma usukwamukele ukuqinisekiswa kokuthi "ungumuntu" kuzovela inkinobho "Yokufinyelela". Uma ucindezela, uzokwazi ukubona idatha yokuqhathanisa onayo.
Manje, akuyona ukuphela kwendlela. Imininingwane ehlukile nayo ingabukwa ngesitifiketi sedijithali. Le inobuhle nobubi bayo, kepha kungaba enye indlela yokufinyelela.
Ngabe kungcono ukufinyelela ngesitifiketi sedijithali?
Uma uzibuza, kufanele sikutshele lokho isitifiketi sedijithali siyindlela ephephe kakhulu, kepha zingabuye zintshontshelwe futhi zilahle imininingwane, iphelelwe yisikhathi noma ivinjelwe, ikakhulukazi uma ungafaki imininingwane kahle, ngakho-ke kuzofanela ukwenze kube semthethweni ukuvula (futhi akuvamile ukwenziwa ku-inthanethi).
Kwenzekani uma ungakwazi ukufinyelela leyo datha ku-SEPE?
Kungenzeka kuwe ngesikhathi esithile ukuthi ume phambi kwekhompyutha noma iselula noma ithebhulethi futhi ngemuva kokwenza zonke izinyathelo zangaphambilini, ikhasi lewebhu alikukhombisi leyo datha ehlukile. Kungani?
Yebo, ngokwesisekelo akufanele ukhathazeke, bese uvumela isikhathi esithile sidlule ukubona ukuthi iphutha lizovela kamuva. Futhi ukuthi, kwesinye isikhathi, lapho iwebhu yehluleka, kungenxa yokuthi balahla idatha.
Lokho wukuthi, bayabuyekeza noma bafake idatha futhi, ukuze bagweme izinkinga lapho bezilondoloza, bakhubaza ukufinyelela amahora ambalwa (isikhathi esidingekayo ukulayisha idatha noma ukuvuselela yonke into). Manje, uma ngemuva kwezinsuku ezimbalwa ubona ukuthi ukwehluleka kuyaqhubeka, kungakuhle ukwazisa noma ubone ukuthi ngabe kukhona yini izindaba ezixhasa le nkinga.
Kungenzeka futhi kube ukuvalwa okuhleliwe kwemisebenzi yesondlo, kepha imvamisa kulawa macala bavame ukukwazisa ngaphambi kokwenza okudingayo ngaphambi kokuthi isevisi yehle isikhashana.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Umnotho jikelele » Sepe: idatha yokuqhathanisa